Dagaal khasaaro sababay oo ka dhacay gobolka Sanaag & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Dagaal khasaaro sababay oo ka dhacay gobolka Sanaag & Wararkii ugu dambeeyay
Dagaal khasaaro sababay oo ka dhacay gobolka Sanaag & Wararkii ugu dambeeyay
Sanaag (Halqaran.com) – Wararka naga soo garaya deegaanka Shidan gaar ahaan agagaarka Buuraha Calamadoow oo ka tirsan Gobolka Sanaag ayaa sheegaya halkaasi uu ka dhacay dagaal Khasaaro Geeystey.
Dagaalkan ayaa waxaa uu u dhaxeeyey laba maleeshiyo oo hubeysan, kuwaasi oo dadka deegaanka ay sheegeen inay isku heysteen Goob Macdanta noocyadeeda kala duwan laga qodo, iyada oo ay ku heshiin waayeen.
Dadka deegaanka ayaa Warbaahinta u xaqiijiyey in Dagaalkaasi uu ku dhintey hal Ruux, halka labo kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo dhammaantood ah maleeshiyaadka dagaallamay.
Maleeshiyaadkaasi hubeysan ayaa dhowr jeer oo kale deegaankaasi ku dagaalamay, iyaga oo ku heshiin waayey macdanta ay halkaasi ka wada gurtaan.
Wararka ayaa intaasi ku daraya, in ay Odayaasha iyo Waxgaradka deegaanka Yubbe ay ku baxeen maleeshiyaadka dagaallamay.
Dagaal khasaaro sababay oo ka dhacay gobolka Sanaag